सैन्य चिफ र अर्णबलाई प्रसाईको यस्तो चेतावनीः ‘म त जन्मजातै अन्धो हुँ तर तिम्रा दृष्टिलाई सहिद नबनाउ (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सैन्य चिफ र अर्णबलाई प्रसाईको यस्तो चेतावनीः ‘म त जन्मजातै अन्धो हुँ तर तिम्रा दृष्टिलाई सहिद नबनाउ (भिडियो)
सैन्य चिफ र अर्णबलाई प्रसाईको यस्तो चेतावनीः ‘म त जन्मजातै अन्धो हुँ तर तिम्रा दृष्टिलाई सहिद नबनाउ (भिडियो)
admin May 22, 2020 भिडियो, समाचार	0
नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत बीच सितयुद्ध बढीरहेको छ । नेपालसँग प्रसस्त प्रमाणहरु हुँदाहुदैँ पनि भारतले उक्त भुमि धेरै पहिले देखि अतिक्रमण गर्दै आएको थियो । जनास्थरमा धेरै कुरा उठेपनि सरकारको बागडोर समाल्नेहरुले यो कुरालाई त्यति चासो दिएनन ।
कुरा र भाषणमा सिमित सिमा विवाद बारे बेला बेला विभिन्न कोणबाट कुरा उठेपनि समस्याको समाधान भने निस्किएन । अहिले पनि धेरै नेपालीलाई डर लागेको छ कि कागजमा मात्र सिमित हुने त होईन ? यसै बीच भारतिय मिडियाहरुले पनि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयलाई प्राथमिकता साथ भ्रामक समाचारहरु प्रशारण गरिरहेका छन ।
यस विषयमा भारतिय सेनाका चिफ मनोज मुकुन्द नरभावीले दिएको स्टेटमेन्ट र पत्रकार अर्णव ग्वास्वामीले नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतसंग लिएको अन्तरवार्ता यतिबेला ट्रेन्डिङमा छन् ।
यसै विषय केन्द्रित रहेर कालापानी र लिम्पियाधुरा लिपुलेक बारेका यथस्ट प्रमाण सहित र भारतलाई गतिलो जवाफ झापाका प्रखर एक देशभक्त शसक्त युवा रमेश प्रसाईले दिएका छन् ।
बाँकी उनको पुरा भिडियो यहाँ हेर्नुहोस:
बजारमा आयो अत्यन्त सस्तो बजाजको एभेन्जर १६०, जस्को मुल्य ८१ हजार